Ulungelelwaniso: Abathengisi bandisa njani iMithombo yeendaba ngeZinto ezihlawulelweyo kunye nezoHlawulwayo eziNikezelweyo | Martech Zone
NgoMvulo, nge-18 kaDisemba ngo-2017 NgoLwesibini, Januwari 12, 2021 UJohn Koetsier
Ukunyanga ukuthengisa okuhlawulelweyo kunye nentengiso engumnini ngokwahlukeneyo kweendleko kubathengisi, inqanaba kunye nengeniso. Uninzi lwentengiso luvavanya amajelo ngokwahlukeneyo, okanye, ukwahlulahlula ukuhlawula, ukurhola, kunye nentengiso ephethwe ngabanini.
Ushiya i-50-100% yeziphumo zakho ezinokubakho etafileni.
Kutshanje ndibuze phantse i-CMOs ezilikhulu kunye nabaphetheyo kwezentengiso: Zenza njani iimpembelelo zentengiso ezihlawulelweyo kunye nezikhuthazayo? Babo iimpendulo babe nokuqonda okumangalisayo, kwaye banikezela ubungqina obunamandla bokuba abathengisi kufuneka bafune kwaye baxhaphaze ii-synergies kungekuphela ngaphakathi kodwa konke phakathi kwawo onke amajelo abo okuthengisa.
Uluntu ngumzekelo ocacileyo.
Uninzi lweebranti zejusi zentlalo kunye nentlawulo encinci. Kodwa abanye abathengisi bafumanisa ukuba izibonelelo zinwenwela ngaphaya kweziphumo zemithombo yeendaba ezingcono. Umzekelo, mhlawumbi… kwintengiso yophando lwezinto eziphilayo.
Sisungule umkhankaso wentengiso ku-Facebook ukukhuthaza uhambo oluya simahla. Oku kukhokelele kumawakawaka okuthandwa, izabelo, ii-tweets kunye namakhonkco angama-50 angenayo kwiibhloko zehambo. Ukuthuthwa kwetrafikhi yendalo kuphuculwe ngama-35% kwisithuba seenyanga ezimbalwa kuba izabelo zentlalo kunye nokunxibelelana okungaphakathi zizinto eziphambili ezikwindawo yeGoogle algorithm. U-Amine Rahal, umseki kunye ne-CEO yeLittle Dragon Media
Ngamanye amagama, ukuhlawulwa kwezentlalo kukhokelele ekuzuzeni intlalontle kukhokelela ekufumaneni i-SEO kukhokelele ekugcino kwewebhu.
Leyo yikhonkco elungileyo lesizathu, ukuba ungumakethi ngohlahlo-lwabiwo mali olunomda.
Omnye umzekelo? Hlawula ucofa nganye kwi-organic ye-SEO.
Inyaniso yokuba uqhuba ukugcwala kwezithuthi kwiipropathi zakho zewebhu zinefuthe elifanelekileyo:
Ngokomndilili, sibonile ukuphakama okungama-10 ukuya kuma-20% kwitrafikhi yokukhangela ye-organic yamagama aphambili kunye namabinzana apho kubekwa khona iintengiso, ngakumbi kwindawo yokukhangela enophawu. Ezo ntengiso zikwakhona ezifikelelekayo kwaye ziyaqhuba kakuhle, njengoko zixabisa kakhulu. UKent Lewis, umsunguli kunye noMongameli we-Anvil
Kutheni le nto isebenza?
U-Laura Simis we Coalmarch uthi ekubeni ukugcwala kwephepha kuyinto ebangela inqanaba lokukhangela kwi-injini yokukhangela, ukonyusa ukugcwala kwiphepha elithile ngokusebenzisa imithombo yeendaba ehlawulelweyo kunokuphucula ukubanakho kwelo phepha ukubeka kwinqanaba elifanelekileyo.
Ke loluphi uhlobo lokuphakamisa onokuthi uluvelise kule ndlela yokudibanisa i-SEM kunye ne-PPC? Abathengisi endibavavanyileyo bathi iziphumo zabo zisusela kwi-10 ukuya kwi-40% yokuphakamisa. Isenokungaphazanyiswa ngumhlaba… kodwa yona isimahla.
Umzekelo omnye onomdla ngokwenene: i-organic ye-SEO kunye neentengiso zentengiso kuGoogle.
Oku kukhokelele kukonyusa okukhulu kwe-7X kwingeniso yentengiso enye.
UAlison Garrison, umlawuli omkhulu kwezentengiso e Volusion, iqonga le-ecommerce le-SMBs, libone iinyanga ezili-12 ezinde ze-enjini yokukhangela ye-organic zisebenza kakuhle xa zibeka iintengiso kuGoogle.
Emva kokukhaba iphulo lokutya, umsebenzi we-SEO owawusenzeka malunga nonyaka ufumene ukubambeka okubonakalayo, kwaye ukugcwala okuvela kuphando lwezinto eziphilayo kwandise i-325% iyonke nangaphezulu kwe-400% ukusuka kwiselfowuni yedwa unyaka-nangaphezulu. UAlison Garrison
Kodwa ingeniso yatsiba ngokupheleleyo eluphahleni ngokunjalo… kubandakanya nengeniso yophando lwezinto eziphilayo.
Ingeniso kuphando lwezinto eziphilayo inyuke nge-240% ngelo xesha. Ukuthengisa ukutya iintengiso bekubalulekile kwimpumelelo apha - ukugcwala kwabantu ngokubanzi kunyuke ngaphezulu kwe-2,500%, ukugcwala kwabantu abahambahambayo kunyuke ngaphezulu kwe-10,000%, ingeniso inyuswe ngaphezulu kwe-800%, ingeniso yeselfowuni inyuswe ngaphezulu kwe-80,000 %- hayi itypo.
Ngokucacileyo, umthengi wakhe wayeqala kwisiseko esincinci sewebhu kunye nengeniso yeselfowuni. Kwaye, kukho ezinye ezimbini ezibaluleke kakhulu. Inye: Utyalomali unyaka opheleleyo kukusebenza kweinjini yokukhangela. Kukuzinikezela kunye nokuzama- kunye nembono yexesha elide- ongasoloko uyibona. Kwaye ezimbini: i-mileage yakho ingahluka. Kungenxa yokuba umthengisi omnye ujonge inyanga kwaye ubetha iinkwenkwezi oko akuthethi ukuba wonke umthengisi uya kufumana iziphumo ezifanayo.
Okwangoku, iziphumo ziyamangalisa.
Kwaye, ubuncinci, iziphumo zeGarrison zingqina isidingo semanyano phakathi kweendlela zentengiso. Abathengisi abangafuniyo nokuxhaphaza ubudlelwane phakathi kweendlela zentengiso ezihlawulelweyo kunye nezinto eziphilayo bayaphoswa yigolide esulungekileyo.
Isifundo esipheleleyo esinokuqonda kubo bonke abathengisi endithe ndathetha nabo sifumaneka simahla apha.
Khuphela iSifundo esiPheleleyo apha
tags: UAlison Garrisonallison ikampuanvilcoalmarchUKent Lewislaura simisurhweboamajelo entengisoomnichannelImithombo yeendaba eziphilayouphando lwezinto eziphilayoeziphilayo eziphilayoabeendabaImidiya ehlawulwayoukukhangela okuhlawulelweyoPPCivolus
UJohn Koetsier yintatheli, umhlalutyi kunye nekamva. Njengoqoqosho lweSelfowuni e TUNE, Ndiqikelela kwaye ndihlalutye imikhwa echaphazela i-ecosystem ehambayo. Ndibe yintatheli, umhlalutyi, kunye nolawulo oludibeneyo, kwaye ndikubhale phantsi ukunyuka koqoqosho oluhambayo. Ngaphambi kokujoyina i-TUNE, ndakhe iqela lophando le-VB Insight eVentureBeat kwaye ndalawula amaqela enza isoftware yamaqabane afana ne-Intel neDisney. Ukongeza, ndikhokele amaqela ezobuchwephesha, ndakha iisayithi zentlalo kunye neeapps ezihambayo, kwaye ndadibana neselfowuni, intlalontle kunye ne-IoT. Kwi-2014, ndaye ndachongwa njengeliphambili kwi-Folio ye-100 kumzi mveliso weendaba "abona barhwebi banobuchule kunye nabathengisi bemarike." Ndihlala eBritish Columbia, eCanada nosapho lwam, apho ndiqeqesha khona ibaseball kunye nehockey, nangona hayi ngexesha elinye.
Yintoni i-ROI yoMthengi othembekileyo?